Maxaa hor taagan dhameystirta dastuurka? | KEYDMEDIA ONLINE
Dastuurka Soomaaliya ayaa qabyo qoraal ahaa tan iyo 2012-kii, isagoo waayey cid masuuliyad iska saarta, isla markaana dhameystirta, taasoo keentay inuu noqdo mashruuc aan dhamaad lahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Soomaaliya ayaa ku shaqeysa nidaam dastuur oo KMG ah, waxana dawladihii dalka soo maray lagu eedeeyaa in ay ka gaabiyeen dhameystirka dastuurkan muddadda badan qabyada ah.
Dastuurkan iminka lagu shaqeeyo ayaa aas aaskiisa waxaa saldhig u ahaa axdigii KMG ahaa ee ay Soomaaliya ku dhaqmeysay tan iyo dowladdii Carto, iyo heshiiski Jabuuti ee lagu soo dhisay Dowladdii Shariif Sheekh Axmed, waxana qorshihiisa qoridda lagu dejiyey muddo labo sano iyo bar ah, iyadoo ugu danbeynti la ansixiyey 1-dii August ee sanadkii 2012-kii.
Wixii intaasi ka danbeeyey dastuurka ayaa noqday mid la dhaqaajin waayey, iyadoo Golayashii Sharci dajin ee dalka soo maray ay ka gaabiyeen qabyo tirka dastuurka si uu u noqdo mid dhameystiran.
Maraaxiladii uu soo maray.
Guddiyadii Dastuurka loo xil saaray oo uu ku jiray kii Barlamankii iminka waqtigiisu dhamaaday ayaa dhowr jeer ka fariistay howlaha la xiriira dhameystirka dastuurka waxana ay hoosta ka xariiqeen in 85% ( Boqolkiiba Sideetan Iyo Shan) la dhameystiray Dastuurka isla markaana ay harsan yihiin qodobo yar oo u baahan turxaan bixin.
Billowgii bishii Janaayo 2013 ayaa marki ugu horreysay la dhisay guddiga dib u eegista Dastuurka ee barlamnkii 9-aad, waxana bishii luuliyo ee isla sanadkaasi la soo saaray Sharci Lamb. 27 ee lagu dhisay Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib-u-eegidda iyo Hirgelinta Dastuurka.
Bishii Juun 2014 waxaa la magacaabay xubnaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib-u-eegidda iyo Hirgelinta Dastuurka iyadoo Baarlamaankii 9-aad uu wax-ka-baddel ku sameeyey labo qodob oo kamid ah Dastuurka KMG, kuwaasoo kala ah Qobka 67-aad iyo Qodobka 138-aad
Barlamankii 9-aad ayaa ugu danbeyntii ansixiyey qaraar jiheynaya hannaanka dib u eegidda dastuurka.
Bishii April 2017-kii ayaa la doortay xubnaha Guddiga La-socodka Dib- u- eegidda iyo Hiregelinta Dastuurka ee Baarlamaanka 10-aad, kuwaasoo ka kooban labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka oo min hal ergo ay ka imaneyso.
Inkastoo dastuurka KMG ah marar badan dib u eegis lagu sameeyey, misana waxa ay howlaha dib eegista soo bilawdeen sanadkii 2018- hayeeshee, ilaa iyo iminka ma jiraan wax guulo ah oo laga gaaray dhameystirkiisa.
Dastuurka qabyo qoraalka ah ayey howsha dhameystirkiisu iminka hortaallaa Barlamanka 11-aad ee dhawaan la filayo in la soo dhiso kuwaasoo ku bilaabi doono qodobadiisa qabyo tirin si uu u noqdo Dastuur rasmi ah.
Aragtida Shacabka iyo Saameynta uu ku leeyahay Khilaafyada
Is qab-qabsiga Madaxda Soomaalida ayaa inta badan lagu sababeeya Dastuurka KMG ah, kaasoo inta badan qodobadiisa aysan kala qeexeynin awoodaha ay kala lee yihiin masuuliyiinta is qabta, waxana Dastuurka lagu tilmaamaa heshiiska ugu sareeyey ee xadidadda awoodda iyo heykalka aas aasiga ee ay Dawladdi leedahay.
Dadka Soomaalida ee sida dhaw ula socda arimaha siyaasada dalka ayaa arinta Dastuurka ku tilmaama mashruuc aan dhamaad lahayn, kaasoo isagoo howshiisu qabyo tahay ay isku badalaan golayaasha sharci dajinta dalka.
Si kastaba, Dastuurka Soomaaliya oo ah arrin masiiri ah ayaa waxaa ku jira qodobbo u baahan in laga galo wada xaajood siyaasadeed iyo is-afgarad, waxana waxyaabaha diidaya arimahaasi lagu tilmaamayaa isku tanaasul la'aan iyo aaminaad darro ka dhaxeysa madaxda Soomaalida maadaama gaba gabadiisa heshiis wada ogol ah laga rabo Madaxda Dawlada dhexe iyo Maamulada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.